International Recognized MBA	Featured
Earn an International Recognized MBA....
2019' June Intake (classes:Sunday ONLY) 15th Batch
June 1 အတန်းစမည်။
မေ ၁၈ ရက်နေ့ နောက်ဆုံးထားသင်တန်းအပ်သူများအတွက် Discount USD 750...
USD 6700 (Before) ... USD 5950 (Now) - 12 installments
ကနဦးကျောင်းလခအနေဖြင့် USD 1250 သွင်းရမည်ဖြစ်ပြီး ကျန်သင်တန်းကြေးများကို Monthly payment အနေဖြင့် USD 392/month သာပေးသွင်းရမည်ဖြစ်ပြီး စုစုပေါင်း (၁၂) လ သာပေးသွင်း ရပါမည်။
Verification Number : MQA/FA 1199 (http://www2.mqa.gov.my/mqr/)
EVER UP College တွင် တက်ရောက်နိုင်သည့် MUST MBA Programme သည် ...
 မလေးရှားနိုင်ငံတွင် Public and Private Colleges and Universities စုစုပေါင်း ၃၉၂ ခု ရှိသည့် အနက် Malaysia University of Science and Technology (MUST) သည် အဆင့် ၃၉ တွင် ရပ်တည်နေပါသော တက္ကသိုလ်ကြီးတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။
 Blended Assessment ဖြစ်သော Attendance, Participation, Assignments, Case Studies and Exams ဖြစ်သည့် အတွက်ကြောင့် အခက်အခဲအနည်းဆုံးဖြင့် သင်ယူဖြေဆိုအောင်မြင် သည့် MBA Programme တစ်ခုဖြစ်သည်။
 ဘာသာရပ် တစ်ခုပြီးမှ ဘာသာရပ် နောက်တစ်ခုကို သင်ကြားရသည့်အတွက် စိတ်ဖိစီးမှု အနည်းဆုံးဖြင့် သင်ယူနိုင်သဖြင့် အလုပ်တစ်ဖက် နှင့်တက်ရောက်လိုသူများအတွက် အထူးပင်သင့်တော်သည်။
 တစ်ပတ်လျှင် တနင်္ဂနွေ တစ်ရက်တည်းသာ တက်ရောက်ရသဖြင့်မိမိအလုပ်အကိုင် မပျက်သင်ယူနိုင်သော MBA Program ဖြစ်သည်။
 EVER UP College ၏ MUST MBA Program တွင် ထိပ်တန်းစီးပွါးရေး လုပ်ငန်းရှင်များ နှင့် International Organization ကြီးများမှ အရာရှိများ၊ မန်နေဂျာများ တက်ရောက်သင်ကြားနေ ပါသဖြင့် High Status Business Network များကို ရရှိနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
 Malaysia University of Science and Technology (MUST) ၏ International Lecturers များနှင့် EVER UP မှ နိုင်ငံတစ်ကာအဆင့်ရှိ ဝါရင့်ဆရာ/မ များ ပူးပေါင်းသင်ကြားသောကြောင့် စီးပွါးရေးအတွက် အရေးကြီးသော International Learning Experiences များရရှိနိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။
 ဘွဲ့ နှင်းသဘင်အခမ်းအနားကို Malaysia နိုင်ငံရှိ MUST တက္ကသိုလ်ကြီးတွင် တက်ရောက်၍ MBA ဘွဲ့ကို ရယူရမည်ဖြစ်ပါသည်။
MBA PROGRAM STRUCTURE (9 subjects + Project Report)
Assignment, presentation, attendance and discussion (60%) + Exam (40%)
1. MBA 1014 Managerial Economics
2. MBA 1024 Business Statistics
3. MBA 1054 Leadership & Management in Organizations
4. MBA 1064 Financial Management
5. MBA 1074 Marketing Management
6. MBA 1084 Managerial Accounting
7. MBA 1104 Corporate Strategy
8. MBA1034 Business Law and Ethics
9. MBA 2904 Research Methods
10. MBA 2198 Master Project Paper
သင်တန်းချိန် …ONLY တနင်္ဂနွေ (နံနက် ၉ - ညနေ ၅:၀၀) နာရီ
သင်တန်းကာလ … ၁၅ လ
• Any graduate (or)
• UK Qualifications – Level6diploma (eg: ABE-UK, OTHM-UK, etc…) (or)
• Recognized Diploma + Relevant years of working experiences in International organizations
ကျောင်းဝင်ခွင့်အတွက် အသေးစိပ်အချက်အလက်များကို ဆွေးနွေးလိုသူများ၊ ကျောင်းအပ်နှံလိုသူများ အတွက် အောက်ပါလိပ်စာ သို့လူကိုယ်တိုင် လာရောက်၍ဖြစ်စေ ၊ ဖုန်းနံပါတ်များသို့ ဆက်သွယ်၍ဖြစ်စေ စုံစမ်းမေးမြန်းနိုင်ပါသည်။
no: 29, Hledan Street, (Lower block , between 10th street and 11th street) Lanmadaw Tsp, Yangon.
Phone:09 444 777 901 ~ 903
In 1995, the then Prime Minister, Tun Dr. Mahathir Mohammad andadelegation from Malaysia madeaworking visit to Massachusetts Institute of Technology (MIT) and endorsed the establishment ofauniversity modelled after MIT. An agreement was signed in January 1997 to establish the Malaysia University of Science and Technology (MUST). In its formative years, MUST was fully assisted and supported by MIT,aworld-renowned university noted for its education and research in advanced science and technology.